Ciidamada dowladda oo gudaha u galay qeybo ka mid ah deegaanka Mukhtaar Roobow - Caasimada Online
Home Warar Ciidamada dowladda oo gudaha u galay qeybo ka mid ah deegaanka Mukhtaar...
Ciidamada dowladda oo gudaha u galay qeybo ka mid ah deegaanka Mukhtaar Roobow
Baydhabo (Caasimada Online) – Wararka aan ka heleyno deegaanka Abal ee gobolka Bakool ayaa sheegaya in qeybo kamid ah deegaanka ay gudaha u galeen ciidamada dowlada oo garabsanaaya kuwa maamulka Koonfur Galbeed.
Ciidamada dowlada iyo kuwa maamulka ayaa deegaanka Abal kaga sugan hal jiho oo ay ku sugnaayen dagaalyahaano taabacsan wadaadka Mukhtaar Roobow.
Ciidamada dowlada iyo kuwa Mukhtaar Roobow ayaa ayaa si siman u heysta dhowr deegaan oo inta badan ay duulaanka kusoo qaadan maleeshiyaadka Shabaab, halka maleeshiyaadka Shabaabna ay yihiin kuwo weli ku sugan deegaano ku dhow dhow Abal.
Ciidamada dowlada ee gaaray Abal ayaa watay Hub iyo gaadiid dagaal oo loogu deeqaayay Mukhtaar Roobow.
Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa xaqiijiyay in ciidamada dowlada ay gaaren qeybo kamid ah deegaanka Abal.
Sidoo kale, maleeshiyaadka Shabaab ayaa heysta ilaa afar deegaan oo aan ka fogeyn deegaanka Abal, waxaana xusid mudan inay ku hareereysan yihiin deegaanka Abal, markii laga reebo hal jiho oo ay gacanta ku hayaan Roobow iyo ciidamada dowlada.
Geesta kale, maleeshiyaadka Shabaab ayaa bilaabay dhaqdhaqaaq ay uga hortagayaan in ciidamada dowlada ay ku faafaan deegaanada ku jira gacanta Roobow.
Dhageyso:-Maamulka Hir-Shabeelle Oo Ka Warbixiyay Howlgalkii Ay Fuliyeen Ciidamada Danab
Kenya and Tanzania have made some progress in dismantling terrorist networks, but the war is far from over as the Somalia militant group Al...